Monday October 14, 2019 - 19:28:27 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Wadanka Suuriya waxaa wali kasii socda howlgalka loogu magac daray Nabcu salaam ee ka dhanka ah maleeshiyaadka malaaxidada kurdiyiinta ee maamula inta badan gobollada dhaca waqooyi bari iyo waqooyiga wadankaasi.
Wararka ka imaanaya Shaam ayaa sheegaya in dagaalo culus ay wali ka socdaan deegaanno dhowr ah oo ka kala tirsan gobollada Raqqa iyo Xasakah oo sanadadii lasoo dhaafay ay ku xooganayeen maleeshiyaadka malaaxidada ah ee mareykanku tababaray.
Ciidamada Dowladda Turkiga iyo maleeshiyaadka kooxaha mucaaradka ah ayaa guluf dagaaleed xooggan ku haya deegaanno dhowr ah oo ku teedsan xuduud beenaadka, dagaallada ugu culus ayaa ka socda baadiyaha magaalooyinka Ra'sul ceyn iyo Tal alabyad oo intooda badan ay qabsadeen ciidamada huwanta ah.
Shalay gelinkii dambe ayay ciidamada isbahaysanaya waxay dagaal kula wareegeen gacan ku haynta magaalada Tal alabyad halkaas oo laga cayriyay maleeshiyaadkii kurdiyiinta.
Saraakiil u hadlay kooxaha mucaaradka ayaa warbaahinta u sheegay in hareerayn maalmo kooban qaadatay kadib ay dib ula wareegeen magaaladan istiraatiijiga ah oo kaabiga ku haysa xuduud beenaadka ay wadaagaan suuriya iyo turkiga.
magaalada Tal alabyada oo sanaddii 2015 ay qabsadeen maleeshiyaadka kurdiyiinta ayaa ah mid istiraatiiji ah waxaana meel ku dhow ku yaal macbar ama marin xuduudeed laysaga kala goosho suuriya iyo turkiga.
Dagaallo culus oo ay barbar socdeen duqeymo xagga iyo cirka ah ayaa lagasoo sheegayaa deegaannada xuduud beenaadka dhaca, maleeshiyaadka isku magacaabay ciidanka dimuquraadiga Suuriya ayaa qirtay in ku dhowaad 70 dagaalyahan looga dilay dagaalka halka wasaaradda difaaca dowladda Turkiga ayaa tirakoob ay soo saartay dhankeeda ku sheegtay in dagaalka 6 maalmood jirsaday ay ku dishay 550 askari oo kamid ah maleeshiyaadka Kurdiyiinta.
Wararka laga helaya dhanka galbeed ee wabiga furaat wadanka Suuriya ayaa sheegaya in kumanaan kun oo ciidamo dheeri ah dowladda Turkiga ay udirtay deegaanadaas si halkaas ay uga bilaabaan guluf dagaaleed hor leh, wariyaasha soo tabiya dagaalka suuriya ayaa sheegay in turkiga iyo xulufadiisa ay doonayaan sidii ay magaalada Manjbej uga qabsan lahaayeen kurdiyiinta ka hor inta aysan halkaas usoo dhaqaaqin ciidamada nidaamka bishaar Al-asad iyo kuwa Ruushka.
jiha wareer ayaa durbadiiba ku yimid duullaanka Turkiga ee suuriya kadib markii maleeshiyaadka PKK ay shalay iclaamiyeen in heshiis ay lagaareen nidaamka al-asad iyo ruushka si magaaloyin dhowr ah looga badbaadiyo ciidanka turkiga.
afhayeen u hadlay maleeshiyaadka kurdiyiinta ayaa sheegay in ay magaaloyinka ay maamulaan ku wareejin doonaan nidaamka al-asad iyo xulufadiisa si ay uga feejignaadaan guluf dagaaleedka turkiga.
Durbadiiba caqabadaha soo wajahay dowladda turkiga ayaa saameyn ku yeeshay howlgaladeeda oo khubaradu ay ku sheegayaan kuwa wali aysan faru ka qodnayn,